तपाईकी जिबनसाथिले धोका त दिइरहेकी छैनन् ? यसरी थाहा पाउनुहोस् - MONGOL KHABAR
तपाईकी जिबनसाथिले धोका त दिइरहेकी छैनन् ? यसरी थाहा पाउनुहोस्
काठमान्डू । भनिन्छ श्रीमान श्रीमतीको नाता सबैभन्दा उत्तम र पवित्र नाता हो । तर कहिले काँही भने श्रीमान् श्रीमतीबीच एक अर्काप्रति अविश्वस पैदा भएर सम्बन्ध नै धरापमा पर्ने खतरा हुन्छ ।
१) फोन कल
तपाईको श्रीमती फोनमा कत्तिको झुन्डिन्छिन् ? तपाईँको अगाडि फोन आउँदा उनको हाउभाउमा कुनै परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन ? बारम्बर फोन आइरहने फोन, स्वरको परिवर्तन, मेसेज गर्ने प्रवृत्तिहरुले पनि तपाईंले श्रीमतीले दिइरहेको छ या छैन भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।
फोन आएको बेला आवाज कम गर्ने, अकस्मात बोल्ने शैलीमा परिवर्तन गर्छिन भने सम्झिनुस, उनको नियत ठीक छैन । थाहै नपाई तपाईमाथि धोका भइरहेको हुन सक्छ ।
उनका केटी साथी कति छन् ? केटी साथीसँग पहिलेको भन्दा बढी समय बिताउँछिन कि बिताउन्नन ? कतै केटी साथीलाई भेटन जाने भनेर अरु कसैलाई भेट्न त गएकी छैनन् ? केही समय अघिसम्म बेलुकी अरुसँग समय नबिताउने तपाईंको श्रीमती एकाएक धेरैजसो समय बाहिर नै बिताउने गर्न थाल्छिन् भने तपाईंमाथि धोका भइरहेको हुनसक्छ । तपाईंकी श्रीमती केटी साथीहरुसँग नभई अरु कुनै मानिससँग समय बिताइरहेको हुनसक्छ।
२) नुहाउने र जीम
३) श्रीमतीको बास्ना
४) आँखा जुधाई
पहिला आँखा जुधाएर कुरा गर्ने तपाईंकी श्रीमती अहिले प्रश्नहरु सोध्दा एकाएक यसो गर्न बन्द गरेकी छिन् भने होसियार हुनुहोस्।
५) यौन विचलन
कतै तपाईंको श्रीमतीले तपाईलाई झारा टार्ने गरी शारीरिक सम्बन्धमा साथ मात्रै त दिएकी छैनन् ? के उनको सेक्स प्रतिको रुची पहिलाको भन्दा कम छ ?
के उनले तपाईंले कहिले नगर्नुभएको तरिकाहरु अपनाउन अनुरोध गर्छिन् अथवा के उनले तपाईंलाई सेक्सका नयाँ तरिकाहरुको बारेमा सिकाउने गर्दछिन् ? त्यसो भए उनीमा शंका गर्ने आधारहरु धेरै हुन्छन् । अर्थात तपाईंमाथि श्रीमतीले धोका दिइरहेकी हुन सक्छिन् ।